iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း ~ mgkhainghtoo
iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း
21:39 မောင်ခိုင်ထူး No comments
iphone ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက် Jailbreak လုပ်နည်းလေးပါ။ တနည်းအားဖြင့် ဘောစိတွေ
အတွက် Post ပေါ့ဗျာ။ (iphone) ကိုင်တဲ့သူတွေကို ချစ်လို့စတာနော်။ iphone ဆိုတော့ သိပ်လည်းနား
မလည်ဘူး ရှည်ရှည်ဝေးဝေးလည်းမရှင်းပြတက်ဘူးဗျ။ Android တောင် အနိုင်နိုင် လေ့လာနေရတာဗျာ
အဲဒါကြောင့် Myanmar Mobile Application ကနေယူပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
Credit to - Myanmar Mobile Application
iOS6to 6.1 ကို Untethered Jailbreak လုပ်နည်း (Tutorial) အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ iOS6မှ 6.1 အထိ တင်ထားတဲ့ iPhone/Pad/Pod touch အားလုံးကို Untethered Jailbreak လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် (၁) ။ ။ Jailbreak လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ jailbreak tools ဖြစ်တဲ့ evasi0n jailbreak tool for windows ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
For Windows – Evaders iOS 6.1 Jailbreak tool for windows
For Mac – Evaders iOS 6.1 Jailbreak tool for mac
For Linux – Evaders iOS 6.1 Jailbreak tool for linux
အဆင့်(၂)။ ။ download လုပ်လို့ရလာတဲ့ ဇစ်ဖိုင်ထဲက evasi0n.exe file ကို run ပါ ။ user access control windows pops up ပေါ်လာရင် yes ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။.
အဆင့်(၃)။ ။ မိမိတို့ရဲ့ iPhone/Pad/Pod touch များကို usb ကြိုးဖြင့် ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ iPhone/Pad/Pod touch ကို Passcode ပေးထားတယ်ဆိုရင်ဖြုတ်ထားပါ။ Passcode ဖြုတ်နည်းကတော့ Settings > General > Passcode Lock > ထဲကိုဝင်ပြီး Turn Passcode Off လုပ်လိုက်ပါ။
အဆင့်(၄)။ ။ iDevices ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကို Evasi0n ဆော့ဝဲကသိပြီဆိုရင် Evasion ဆော့ဝဲထဲက Jailbreak ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးက မှိန်နေရာကနေ လင်းလာပါလိမ့်မယ်။
အဆင့် (၅) ။ ။ Jailbreak ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် Jailbreak button ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၆) ။ ။ Evasi0n က မိမိရဲ့ device ကိုစတင် jailbreak လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ကြာပါမယ်။
အဆင့် (၇) ။ ။ iDevices မှာ Lock screen ပြန်ပေါ်လာရင် Slide toUnlock your device bar ကို slide လုပ်ပါ။ “Jailbreak” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ icon လေးကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီ Jailbreak app icon လေးကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ (တစ်ကြိမ်ပဲနှိပ်ပါ)။ အဲဒီမှာ screen က ခေတ္တ black screen ဖြစ်သွားပြီးပြန်တက်လာရင် ခုနကလိုပဲ Jailbraeak နာမည်နဲ့ icon လေးကိုတစ်ကြိမ်ပဲထပ်နှိပ်ပါ။
အဆင့် (၈)။ ။ Evasi0n က jailbreak data တွေကိုဆက်လက်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ iDevices ကိုတခြားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။
အဆင့် (၉)။ ။ Jailbreak process ပြီးပြီဆိုရင် “Done” ဆိုတဲ့ warning ပြပါလိမ့်မယ်။ iPhone/Pad/Pod touch ဟာ reboot ဖြစ်သွားပါမယ်။ reboot နှစ်ခါလောက်ကျပါတယ်။ နည်းနည်းစိတ်ရှည်ပေးပါ။
အဆင့် (၁၀)။ ။ reboot လုပ်ရာကနေ ပြန်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ evasi0n logo ကို screen ပေါ်မှာအကြီးကြီးနဲ့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါပြန်ကျသွားပြီး နောက်တစ်ခါ evasi0m logo ပြန်တက်လာပါမယ်။ ပြီးရင် Lock Screen အနေအထားကိုစတင်ေ၇ာက်ရှိသွားပါမယ်။ Slide to unlock bar ကို slide ဆွဲပြီး home screen ပေါ်ကိုဝင်လိုက်ရင်တော့ Cydia icon ကိုစတင်မြင်၇ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင့်ရဲ့ iOS6တင်ထားတဲ့ i device ကို evasi0n ဆော့ဝဲကိုအသုံးပြုပြီး အောင်မြင်စွာ jailbreak လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Gpad 7.0 EXtreme4ကို root ကျမယ်
nokia symbian touch ဖုန်းတွေကို myanmar font & Key...
SRS Root -One Click Root tool (Support Android ver...
Android device တွေအတွက် Factory reset မချပဲ Gmail ...
Chain tablet version 4.0.4 တွေကို အလွယ်ကူဆုံး root...
i-mobile i693 ကို Root လုပ်ပြီး Fontchanger နဲ့ မြ...
Wireless စနစ်ဖြင့် အားသွင်းနိုင်မည့် Gigastone wir...
Android အတွက် Wondershare Mobile Go
Window (32 bit & 64 bit) များအကြောင်း
Viber : Free Calls & Messages 2.3.2.61 for Generic...
Xilisoft iPad Magic Platinum 5.4
ကွန်ပျူတာရှိသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့Safe Mood အကြောင်း...
paypal အကောင့်ဖွင့်ပြီး အွန်လိုင်းမှာ ပိုက်ပိုက်ရှ...
Window7သမားတွေအတွက် Format ချ Window အသစ်တင်နည်း...
Myanmar Mobile App Store မှမိတ်ဆွေများအတွက် Valent...
Browser တစ်ခုထဲမှာ Facebook , Gmail အကောင့် နှစ်ခု...
Apk ဖိုင်တွေ ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဖော်မယ်
myanmar facebook 2.0.apk မြန်မာလိုပါမြင်နိုင်တယ်တဲ...
အရမ်းအရမ်းမြန်တဲ Wyzo Browser
Web Browsers ရဲ History တွေကိုဘယ်လို Clear လုပ်ရမလ...
Internet Explorer မှာ မြန်မာလိုရေးမရတာ မပေါ်လာတာကို...
Mozilafirefox ဖွင့်လို့ Google မပေါ်လာပဲ ပြောင်းသွာ...
Windows7(64bit) အတွက် Zawgyi Font ပြဿနာအားဖြေရှင...
Window genuine ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းအတွက် Window7loa...